Shilal Khasaara dhaliyay oo ka dhacay Hiiraan iyo Sh/dhexe.
13/06/2022 - 08:01:19 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa shilal saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanno katirsan Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.
Dowladda Hindiya oo billaawday burburinta guryaha dadka Muslimiinta.
13/06/2022 - 07:58:31 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Dowladda Hindiya ayaa sare uqaadday xadgudubyada argagaxa leh ee ay ugeysanayso muslimiinta laga tirada badanyahay ee wadankeeda ku dhaqan.
Hoggaamiyaasha maamul goboleedyada iyo Xasan Sheekh oo kulankii ugu horreeyay ku yeeshay Muqdisho.
11/06/2022 - 15:06:40 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Kulankii ugu horreeyay ayaa magaalada Muqdisho uga furmay waxa loogu yeero golaha wadatashiga qaranka tan iyo markii Xasan Sheekh loo doortay madaxweynaha dowladda Federaalka.
11/06/2022 - 14:11:42 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Guddoomiyaha Xisbiga Waddani Xirsi Xaaji Cali ayaa sheegay in loo maleegay weerar qorshaysan oo gurigiisa lagu beegsaday weerarkaas oo kaga yimi sida uu sheegay dhanka xukuumadda 'Somaliland'.
Maxaad ka ogtahay dhagaraha hay'adaha shisheeye iyo isku duubnidii Soomaalidii hore.
11/06/2022 - 10:05:06 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Hay'adaha shisheeye ama NGO-yadu ma ahayn wax Soomaalidu hore u taqaannay, waxaana dadkeennu ahaa mid isku tiirsan. Tol wal oo meel degaa si hoose ayuu isugu xidhnaan jirey waxaana la odhan jirey "Tol waa tolane".
Mid kamida Jeneraallada ugu awoodda badan dalka Itoobiya oo Xabsiga lagasii daayay.
11/06/2022 - 09:49:40 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Dowladda Itoobiya ayaa xabsiga kasii daysay mid kamida Jeneraallada ugu awoodda badan melleteriga wadanka islamarkaana kaalin weyn ku lahaa dagaalka ka dhan ah Jabhadda Tigreega TPLF.
Iska hor'imaad ay dad ku dhinteen oo Xeebta Boosaaso ku dhaxmaray ciidamo kawada tirsan maamulka 'Puntland'.
11/06/2022 - 09:19:41 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya iska hor'imaad hubaysan oo gobolka Bari ku dhaxmaray ciidamo kawada tirsan maamulka isku magacaabay 'Puntland'.
Xasan Gurguurte oo Fasaxay in Maandooriyaha Khaatka Kenya Soomaaliya loosoo dhoofiyo!.
11/06/2022 - 09:09:48 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Beerlayda dalka Kenya ayaa udabaal degaya guul uu madaxweynahoodu kasoo hooyay socdaal uu dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay ku tagay dalka Soomaaliya.
Warbixin: Ceelbaraf iyo ciidamadii Burundi Xalqada 5aad.
10/06/2022 - 08:33:32 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Dhegeystayaasha Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan intoodii nala socatay waxay horau u dhegesyteen afar qaybood oo ka mid ah Barnmaaimij taxane ah oo ciwaankiisu yahay Ceelbaraf iyo Ciidamadii Burundi.
Hoggaamiyaasha dalalka Itoobiya, Kenya iyo Jabuuti oo ka qeyb galay Caleema saarka Xasan Sheekh.
09/06/2022 - 14:08:13 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Teendhada Afisyooni ee agagaarka xerada Xalane waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu caleema saarayay Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha cusub ee dowladda Federaalka.
Dibad baxyo rabshado wata oo ka bilaawday magaalada Hargeysa.
09/06/2022 - 11:57:47 Wararka Gudaha 860 Liibaan Jeexoow
Bannaan baxyo ay qabteen axsaabta mucaaridka ah ee 'Somaliland' ayaa ka dhacey magaalada Hargeysa. Bannaan baxyadan oo hore ay ugu baaqeen xisbiyada mucaaradka ahi ayay ku sheegeen in ay ka soo horjeedaan muddo kororsi uu sameeyo Muuse Biixi isla markaana waxa ay ku baaqeen in doorashooyinku…
15 katirsan ciidamada DANAB oo ku dhintay qarax ka dhacay gobolka Sh/dhexe [SAWIRRO].
09/06/2022 - 06:59:35 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Qarax aad u xooggan ayaa lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidanka Danab xilli ay ku socdaalayeen duleedka degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe.
Sawirro: Machadka Qurdubah faraciisa deegaanka Jacar oo xaflad dhigtay.
09/06/2022 - 06:03:28 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Xaflad ballaaran oo ka dhacday deegaanka Jacar ee gobolka Galguduud ayaa lagusoo xiray sanad dugsiyeedkii sanadkii hore ee Ardayda Machadka Qurdubah.
Gaari Tikniko ah oo Mooto Bajaaj ku jiiray degmada Hodon.
08/06/2022 - 16:47:58 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Khasaara xooggan ayaa ka dhashay shil baabuur oo markale ka dhacay mid kamida degmooyinka gobolka Banaadir.
Warbixin: Ceelbaraf iyo ciidamadii Burundi Xalqada 4aad.
08/06/2022 - 16:41:54 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
qaybta afaraad ee barnaamijkaan tixanaha ah ee ciwaankiisu yahay Ceel baraf iyo Ciidamadii Burundi waxaan ku eegeynaa dareenka bulshada Ceel baraf soo booqaneysa iyo jewiga deegaanka oo hadba hadda ka dambeysa xasiloonidiisu sii kordheyso
Rooble oo ku dhawaaqay in Muqdisho lageliyay xayriraad 48 saacadood ah.
08/06/2022 - 16:36:21 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xaalad bandaw ah oo aad u adag lagelin doono malaayiin qof oo ku dhaqan magaalada Muqdisho.
Shil ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay duleedka Gaarisa.
08/06/2022 - 13:49:45 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay shil baabuur oo ka dhacay deegaan katirsan gobolka Gaarisa ee dhulka NFD.
Ku dhowaad 20 qof oo lagu dilay weerar ka dhacay waqooyi galbeed dalka Itoobiya.
08/06/2022 - 13:25:38 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Ugu yaraan 19 qof oo uu ku jiro maamul madaxeed deegaan ayaa la diley ka dib dagaallo u dhexeeya ismaamulka Benishanguulka ee dhaca waqooyig galbeed Itoobiya iyo jabhadda Gumuz Peoples Democratic Movement.
Toogasho ay dad ku dhinteen oo ka dhacday bartamaha dalka Jarmalka.
08/06/2022 - 12:17:10 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
waxaa sii kordhaya toogasho wadareedyada ka dhacaya wadamada reergalbeedka kuwaas oo qalqal baahsan ku beeray dadka ku nool Yurub iyo America.
08/06/2022 - 09:22:48 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow